Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
Wonke umuntu udinga iRhapsody of Realities njengesiqondiso seBhayibheli, ikakhulukazi izikhonzi zeVangeli. Joyina le inethiwekhi yokufinyelela, futhi usize abefundisi emhlabeni wonke bathole ingcebo ecebile yeZwi kuRhapsody of Realities.
Singumphakathi we-intanethi wabantu abathandekayo abasebenzisa ubuchwepheshe ukuze bathinte umhlaba we-Inthanethi ngeVangeli. Joyina i-Rhapsody Influencers Network (RIN) namhlanje!
Joyina inethiwekhi yethu yomhlaba wonke yabahumushi abanomsebenzi wokukwenza iZwi likaNkulunkulu litholakale futhi lifinyeleleke kubo bonke abantu ngolimi abalwazi kahle.
Uhlelo lokusebenza leWebhu ye-Rhapsody Prayers ‘Network
I-Rhapsody Prayer Partners 'Network Web App iyisiteji sokuthi wonke umuntu uzinikele ekuthandazeni ukusakazeka kweZwi likaNkulunkulu emhlabeni jikelele, ngeRhapsody of Realities. Bhalisa namhlanje, thumela isicelo sakho somthandazo futhi ake sihlanganyele ngezandla ekwenzeni umthelela empilweni yabanye kanye nempilo yethu!
I-Rhapsody Daily Article Sharing Platform
I-Rhapsody Daily Article Sharing Platform iyi-app elula futhi elula yokusebenzisa i-web eyenza kube lula ukwabelana ngendaba yansuku zonke. Ikhuthaza ukuhlanganyela kabusha futhi ngesikhathi esifanayo inikeza amarekhodi anembile wokusatshalaliswa okwenziwe; konke endaweni eyodwa !!
Yenza okuningi ngeRhapsody of Realities! Buka i-Rhapsody TV, i-Rhapsody Travels ne-Rhapsody Dailies.
Ingabe ufisa ukufunda indlela yokuphila impilo enqobayo nenenjongo? Ingabe ufuna izimfundiso ezihlakaniphile nezimpendulo ezisekelwe eZwini kunoma yimiphi imibuzo eminingi yokuphila? Iqoqo lethu eligcwele lezincwadi ezigcotshiwe lizokuletha isipiliyoni esivuzayo futhi sishintshe impilo yakho kuze kube phakade! Leli sayithi liyinhloko yokubhekisela kuzo zonke izincwadi ngumbhali ongcono kakhulu, uMfundisi Chris Oyakhilome D.Sc., D.D.
I-Rhapsody Mobile App
Thola okuningi kweRhapsody of Realities ekuhambeni! Izwe layo elisha lokuphefumlelwa namandla kaNkulunkulu ahlanganiswe ohlelweni oluhle lweRhapsody of Realities Mobile.